सुनले बनेको संसारकै महँगो बिमान ! – Khabar PatrikaNp
सुनले बनेको संसारकै महँगो बिमान !
August 19, 2020 134
मानिसहरु समयको सदुपयोग गर्दै चाँडोभन्दा चाँडा गन्तव्यमा पुग्न हवाइजहाजको प्रयोग गर्छन् । विमानको विषयमा विभिन्न रोचक घ’टनाहरु सार्वजनिक भइरहँदा केही विषय तपाईलाई थाहा हुन सक्छन् केही नहुन पनि सक्छन् ।
आज हामीले एउटा सुनै सुनले बनेको विमानको विषयमा यहाँ चर्चा गरेका छौं । त्यसो त विमान नै सुनले बनेको छ भने त्यसको मुल्य निकै महँगो हुने नै भयो ।
संसारकै महँगो विमान भएको दाबी गरिएको यो विमानको मुल्य पाँच सय मिलियन डलर रहेको बताइन्छ । बिमानका मालिक हुन साउदी अरबका प्रिन्स अलवालिदविन तलाल। उनले बिमानलाई आफ्नै तरिकाले डिजाईन गर्न लगाएका हुन् ।बाहिर सुनौलो देखिने विमानको भित्री भाग पनि पूरै सनले नै बनाइएको जनाइन्छ । विमानभित्र एउटा कन्सर्ट हल पनि रहेको छ। जहाँ यात्रुहरुले कुनै फङ्सन गर्न सकुन भन्ने हेतुले उनले विमानभित्र कन्सर्ट हल बनाउन लगाएका हुन्
यो पनि पढ्नुहोस;
काठमाडौ । कोरोना भाइरसबाट संक्रमित गर्भवती महिलाको शल्यक्रिया गरी बच्चा जन्मिएको छ । गत मंगलबार कोरोना भाइरस पुष्टि हुनुभएकी उहाँलाई यसअघि काठमााडौ मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिएको थियो । केएमसिबाट कोरोना पुष्टि भएपछि उहाँलाई पाटन अस्पताल रिफर गरिएको थियो । हाल पाटन अस्पतालमा दुईजना गर्भवती महिला कोरोना संक्रमित हुनुहुन्छ । प्रसूति गृहबाट रिफर गरेर जानुभएकी महिलाको भने शल्यक्रिया गरिएको छैन ।
चाँगुनारायण नगरपालिका झौखेल निवासी ३० बर्षीया गर्भवतीलाई पाटन अस्पतालमा त्यहाँका चिकित्सकहरुले शल्यक्रिया गरी सुत्केरी गराएका थिए । संक्रमित गर्भवतीले छोरा जन्माउनु भएको छ । शुक्रबार दिउँसो उहाँको शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माइएको हो, पाटन अस्पताल कोभिड उपचार युनिटमा कार्यरत एक नर्सले भन्नुभयो,“अहिले उहाँको अवस्था सामान्य रहेको छ ।”अस्पतालका निर्देशक डा. विष्णु शर्माले बच्चा र आमाको अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिनुभयो ।
Prevअन्डरवल्डसँग सम्बन्धमा रहेका बलिउडका चर्चित नायिकाहरु……
Nextअ’ल्सर भए पछि कस्तो देखा लक्षण पर्छ..?
मुक्तीनाथको मन्दिरमा १०८ धारा बनाउनुको र’हस्य खुल्यो! ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस
‘गुटबन्दी भयो, बैठक किन बस्ने ?’ : ओली
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (30484)
मुस्लिम अरबिक महिलालाई ग’र्लफ्रेन्ड बनाउदा काठमाण्डौमा महल बन्यो… (15328)